စပိန် တွင် မိတ်ဆက် မည့် OPPO Renault 8 Lite 5G စမတ်ဖုန်း - Pandaily
စပိန် တွင် မိတ်ဆက် မည့် OPPO Renault 8 Lite 5G စမတ်ဖုန်း
Jun 06, 2022, 16:58ညနေ 2022/06/06 23:32:25 Pandaily
စပိန် နိုင်ငံမှာ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က မိတ်ဆက် ခဲ့တဲ့ OPPO Renault 8 Lite 5G စမတ်ဖုန်း. မျောဒယျ က 8GB RAM နဲ့ 128GB Storage ပဲ ရရှိ နိုငျပါတယျ။ အစောပိုငျးက စမတျဖုနျး ထုတျလုပျ သူက Renault 8, Renault 8 Pro နဲ့ Renault 8 Pro + အပါအဝငျ Renault 8 series တှကေို တရုတျ မှာ မိတျဆကျ ခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကွညျ့ ပါ:Snapdragon7Gen 1 နဲ့ လိုကျဖကျ မယျ့ OPPO Reno 8 Series မိတျဆကျ
OPPO Renault 8 Lite 5G ရဲ့ ဒီဇိုင်း နဲ့ အချက်အလက် တွေဟာ Renault7Lite ဒါမှမဟုတ် Renault 7Z 5G နဲ့ အခြေခံ အားဖြင့် တူညီ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဧပြီလ မှာ မိတ်ဆက် ခဲ့တဲ့ OPPO F21 Pro ကလည်း အခြေခံ အားဖြင့် Configuration ပိုင်းမှာ တူညီ နေပါတယ်။ OPPO အနေနဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုး နဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး တည်း ကို ဘာကြောင့် လေး ကြိမ် တိတိ မိတ်ဆက် ခဲ့တာ လဲ ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေး ပါဘူး။
OPPO Renault 8 Lite 5G ကို စပိနျ မှာ ယူရို ၄ ၂၉ (ဒျေါလာ ၄ ၆၀) နဲ့ ဝယျယူ နိုငျပွီး အရောငျ နှဈမြိုး နဲ့ ဝယျယူ ရရှိ နိုငျပါတယျ။
မျောဒယျ မှာ ၆. ၄၃ လကျမ Full HD + Display တပျဆငျ ထားပွီး 2400×1080 Resolution ပါဝငျပါတယျ။ သူ့မှာ Qualcomm Snapdragon 695 ပရို ဆက် ဆာ ကို တပ်ဆင် ထားပြီး 33W အား သွင်း နိုင်စွမ်း ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပြီး 4500mAh ဘတ် ထရီ ကို တပ်ဆင် သူ့ရဲ့ storage ကို microSD card ကနေ 1TB အထိ တိုးမြှင့် နိုင်ပါတယ်။ RAM extension ကိုလည်း ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။
OPPO Renault 8 Lite 5G မှာ 64MP အနောကျ ပငျမ ကငျမ ရာ၊ 2MP macro lens နဲ့ ရှေ့ 16MP lens ပါဝငျတဲ့ 2MP depth sensor တို့ ပါဝငျပါတယျ။
မျောဒယျ မှာ 3.5mm headphone jack, USB Type-C jack, NFC နဲ့ Bluetooth 5.1 တို့ကို ထောကျပံ့ ပေးထားပွီး side fingerprint sensor ကို တပျဆငျ ပေးထားပါတယျ။ IPX4 ရစေို ခံ နိုငျပွီး Android 12 ကိုအခွခေံ ထားတဲ့ Color OS 12 စနဈ ကိုကွိုတငျ ထညျ့သှငျး ထားပါတယျ။